Ukusetshenziswa kweSjHZS90-3B Xixiayuan Water Conservancy Project | Shantui
Isikhathi sokwakha: Septhemba 2020
Inkambu yokufaka (uhlobo lobunjiniyela): ezolimo, amahlathi nokongiwa kwamanzi
I-SjHZS90-3B samente silo isitayela esidala sekhasimende.
NgoSepthemba 2020, izitshalo ezimbili zokubhinca ukhonkolo zeSjHZS090-3B zeShantui Janeoo zikuqedile ngempumelelo ukufakwa nokuthunyelwa futhi zanikezwa kumakhasimende ngokwakhiwa kweXixiayuan Water Conservancy Project.
Ukuthembela ezinzuzweni zokunemba kokulinganisa okuphezulu nokusebenza okulula, isitshalo sokukhonkolo senkampani sikhiqiza ukhonkolo osezingeni eliphakeme wezincazelo ezihlukile ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ukuhlinzeka ngezinto zokwakha ezanele zokwakhiwa kwamaphrojekthi we-Xixiayuan okonga amanzi kanye nemithombo yamandla ekhipha. Lokhu futhi ukusetshenziswa ngempumelelo kwemishini yenkampani kumaphrojekthi amakhulu kazwelonke wokonga amanzi ngemuva kweCentral Yunnan Water Diversion Project.
I-Xixiayuan Water Conservancy Project ingelinye lamaphrojekthi amakhulu kazwelonke okongiwa kwamanzi kanye nokuhlinzekwa ngamanzi. Le phrojekthi ihlanganisa ukukhiqizwa kwamandla kagesi futhi ibheka ukusetshenziswa okuphelele kokuphakelwa kwamanzi nokunisela. Ukugeleza kwamanzi okungazinzile okuphuma eMthonjeni weXiaolangdi kuguqulwa kube ukugeleza okuzinzile ukuqinisekisa ukugeleza okuqhubekayo koMfula Ophuzi. Ngasikhathi sinye, futhi iqeda ngokuyisisekelo ububi bokushefa okuphezulu kwesiteshi se-Xiaolangdi Hydropower Station emifuleni engezansi. Imithelela idlala indima ebalulekile emvelweni, ekuvikelweni kwemvelo, nasemanzini akhiqiza izimboni nezolimo.